Daawo: Farmaajo oo soo jeediyay in xildhibaanada iyo wasiirradu ay dhimaan mushaharkooda – Hornafrik Media Network
Daawo: Farmaajo oo soo jeediyay in xildhibaanada iyo wasiirradu ay dhimaan mushaharkooda
By Liibaan Nuur	 On Oct 29, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirrada inay ka qeyb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha wabiyada Shabeelle iyo Jubba.
Madaxweynaha oo kulan la qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada, wasiirrada, culumada iyo ganacsatada ayaa ugu baaqay inay lacago isugu daraan dadkaas dhibaatada soo gaartay, wuxuuna baarlamaanka ugu baaqay in ay isugu yimaadaan kulan deg deg ah si ay lacago uga jaraan mushaarka ay qaataan uguna caawiyaan dadka dhibaateysan.
Sidoo kale ganacsatada, culumada iyo qurba joogta ayuu ka codsaday madaxweyne Farmaajo in ay gacan ka geystaan gurmadka, si buu yiri ay u fududaato in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo is garabsanaya ay ugu guulaystaan samata bixinta dadka ay dhibanadu ku heysato qeybo ka mid ah gobolada dalka.
“Xukuumadda iyada ha bilowdo inay mushaarka iska jarto, Meeshaan waxaa fadhiyo dad xildhibaano ah, in iyaga laftirkooda loo tago oo kulan la qabto Berri ama Berri dambe si iyagana mushaarkooda uga jaraan lacagihii loogu deeqi lahaa dadkaas dhibaateysan, idinkaa yaqaan waxa loo baahan yahay” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
“Ganacsatada kama rabno inay Percentage bixiyaan, iyagaa noogu jeeb weyn, waxaan ka rabnaa inay geeyaan wax walba oo ay hayaan, Culimada laftirkooda ma jeeb yara, haddii aan intaas isku geyno oo si hufnaan ah u bixino waxaan aaminsanahay in dad badan ay aaminayaan sida aan wax u wadno oo ay wax badan ku darsanayaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Dowladda iyo Beesha Caalamka oo ku balamay in baahida dadka laga jawaabo